ငဆန်နီနှင့်ဘ၀အလွဲများ(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငဆန်နီနှင့်ဘ၀အလွဲများ(၁)
Posted by Sonny on Feb 3, 2012 in Creative Writing, Think Different | 19 comments
အဲဒီမှာစလွဲတော့တာပါပဲ။မှောင်နေသောညမှာမွေးတာလို့အမေကတော့ပြောဖူးတာပါပဲ။ဲ ညမှောင်မှောင်မှာမွေးရင်ကန်းကုန်အောင်မိုက်တတ်တယ်လို့ တော့ပြောတာမှန်များနေမလားမသိဘူး အမှတ်(၅) ရဲစခန်းမှာ သင်္ကြန်မှာ အဒေါ်တစ်ယောက်ကိုအရက်မူးသမားက ရမ်းလို့ လိုက်ရိုက်လိုက်တာ အဖမ်းခံရဘူးတယ်။
၄ ရက်လောက်အချူပ်ကြလိုက်ရတယ်။ ရုံးချိန်းရောဆို တော်တော်အီသွားတယ်။
ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းရအုံးမယ်။ အဲဒါအဒေါ်က အမှုလိုက်ခ ကို သူ့မောင်အရင်းအတွက်ပဲပေးသွားပြီး ငဆန်နီအတွက်တော့ ငဆန်နီဘာသာ ပေးလိုက်ရတယ်။ လွဲမှလွဲဗျာ။
ကိုယ်မှန်သားနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတာ။အဲဒါတစ်လွဲ။မိထ္ထီလာကိုထွက်ပြေးသေးတယ်။ မိထ္ထီလာက တပ်မ ၉၉ (လက်ဝှေ့နာမည်ကြီး)ကအသိဆီကိုထွက်ပြေးတာ အဲဒီမှာ လက်ဝှေ့သင်တာ ဆရာ က လေ့ကျင့်ရင်း ထိုးလိုက်တာ ရှေသွားပဲ့သွားဖူးတယ်။ အလွဲတစ်ခုပေါ့လေ။
ဇာတာနာမည်ကဘရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အသေလေးမွေးတယ်လို့ထင်တာ ရှင်နေလို့တဲ့။အသက်ငါးနှစ်မပြည့်ခင်ကတည်းက ကျောင်းနေချင်တဲ့ ချင်ခြင်းတပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးကကျောင်းအုပ်ဆိုတော့အသက်မပြည့်ပဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
လွဲပြီပေါ့။ ဥာဏ်ရည်ကိန်းကနည်းနည်းရယ် သချာင်္ဆို အမြဲတန်း သုံညပဲ။ ၄တန်းတုံးက မေးခွန်းချပေး
တံနဲ့စာရေးခဲ့ရတယ်။ ခဏခဏမှားတက်တဲ့ကောင် ငဆန်နီအတွက်ကတော့
ခဏခဏစာသင်ခန်းထဲကထွက်ထွက်ပြီး သွားသွေးတယ်။ ဘယ်စာကောင်းကောင်းတော်ပါ့မလဲ။
သူငယ်တန်းမှာ မုန့်ဖိုး ၁၅ ပြား ရတယ်။ အမြဲတန်း ကျောင်းမတက်ခင် မုန့်စားကျောင်းမဆင်းခင်
ကတည်းက ကုန်နှင့်ပြီ။ သူငယ်တန်းတုန်းကဖားခုန်ပြိုင်ဘူးတယ်။ (အခုဒီပိုစ်ရေးရင်းကိုပြန်စစ်ပေလို့..လွဲလိုက်တာမှ..ဖားခုန်ပြိုင်ပွဲကို..ဖာခုန်ပြိုင်ပွဲလို့ရေးမိတယ်…excuse my offensive language use,pls)ပထမဆုရတယ်။ အဲဒါ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဆုပေးမှာမှတ် နေတာ ကျောင်းက အငြိမ့်ငှားပြီးဆုပေးတယ်။ အငြိမ့်မင်းသမီးက ငဆန်နီကို ဆုပေးတာ မှတ်မိနေသေးတဲ့ အလွဲများထဲကတစ်ခုပါ။
မှားစရာရှားလို့ ဖားကိုမှ မှားရသလား ဦးဦးရယ်….
ရွာထဲမှာ စင်္ကြာဝဠာလုံးဆိုင်ရာ …ဖား အခွင့်အရေး အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
ဖားသက်ပြင်း ကြားမှဖြင့် …. ဖရော့ဂ် ဒစ်ခွစ်မီနေးရှင်း ချက်ပတာ တွေ
အာတီကယ်လ်တွေနဲ့ တွေ့နေပါဦးမယ် ….
ခင်လို့ လက်တို့ သွားတာနော…
ဖားလေးရဲ့ဘ၀ကို ၀တ်စနှစ်လုံးပေါက် လေးနဲ့ပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတကား။ တော်သေးတာပေါ့ နာမည်ပြောင်းသွားလို့ သီသီလေးလွတ်သွားတယ် ။ နာမည်မပြောင်းခင် ဖားသက်ပြင်း ကို မှားရေးမိမှဖြင့် …..။
င်္Frogs’ Rights Society က ကိုယ့်ကို တရားစွဲနေမှဖြင့်……
နှစ်လိုဘွယ် ကွန်မင့် လေးပါ ကိုအင်ဇာဂီရေ..ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေနော်
လွဲချော်မှုတွေက တစ်ခါတစ်ခါ ပြန်စဉ်းစားပြန်တော့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
ရင်နင်အောင် လား ရင်နင့်အောင်လား ခင်ဗျာ၊
တခါတလေ လွဲလွဲလေးပဲ ကောင်းသားကလား ( ကိုထူးအိမ်သင်လိုပေါ့)
လုပ်ချင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲ စိတ်ဆွဲသွားလို့ နေမပေါ့
ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ အေးလို့ များလားလို့ ဗျာ
သူငယ်ချင်း ကောင်မလေး ဆို ခဏခဏ ဒုက္ခ ရောက်တယ် စာရေး က နံမယ် “ဇာ“ ကို ရှစ် ခံ မနှိပ် ရင်
“ ဖာ“ ဖြစ်ဖြစ် သွားလို့ နံမယ် စာရင်းထွက်တိုင်း ဘုရားတ နေရတာ၊
ကိုဘရှင် အခုမှပဲ အလွဲတွေနဲ့ သရဲလာခြောက်တယ်။ ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတာပေါ့လေ။ ကလေးတွေစာမေးပွဲ နီးပြီထင်တယ်။ အလွဲတွေကို ဆက်ပါအုန်း။
ဒါနဲ့ ပဲ့သွားတဲ့ရှေ့သွားက ပြန်ဖြည့်ပြီးပြီလား
ညနက်နက်မှာ မွေးရင် မိုက်တွင်းနက်တတ်တယ်ဆိုတော့ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လင်းလင်းထင်းထင်းမွေးရင်ရော ဘာဖြစ်တတ်သလဲဟင် …. သိရင်ပြောပါအုန်း..
ကိုဆန်နီက သတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်။
ကျွန်တော်က သတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၆ ရက်။
ကျွန်တော်က ပိုမှောင်မယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် မည်းတာနေမှာ။ အသားကိုပြောတာပါ။
လပြည့်ကျော် ၁ ရက်က လထွက်လာရင် ထိန်နေတုန်းပဲဗျ။
တချို့ကပြောတော့လည်း ညဖက်မွေးတဲ့သူက အိပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့သူဌေးတဲ့။ နေ့ဖက်မွေးတဲ့သူတွေက အလုပ်လုပ်ပြီး အပင်ပန်းခံရတတ်တယ်တဲ့။
မှတ်ချက်- ကျွန်တော်လည်း ညဖက်မွေးသူဖြစ်ပါကြောင်း ။
(ကျနော်) မှန်းဆတွေးမိ။ (^^)
ထားဝယ်လုံချည် ဆိုတဲ့ စာလေး ဖတ်ဖူးမှာပါ။
မြင်းပန်းတိမ်ရဲ့ မိန်းမကို မြင်းပန်းတိမ် (မြင်းလှဲမောင်း၊ပန်းတိမ်လုပ်သူ) က ရိုက်တာ
ကြားက မနေနိုင်လို့ အဲဒီလူ ကိုဝင်ရိုက်။ အချုပ်ခံရ။ သီတင်းကျွတ် ဝတ်မယ်ဟဲ့ ဆိုတဲ့
ထားဝယ်လုံချည်လေး အပေါင်ဆိုင်ရောက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး။
ကျနော်ကတော့ စာအုပ်ဆိုင်မှာ စာအုပ်ရွေးရင်း ကိုယ့်အိပ်ထဲက Ballpen ထွက်ကျတာကို
ဘေးကလူရဲ့ ဟာ မှတ်ပြီး။ ဟေ့လူ ရော့၊ ခင်ဗျား ဘောလ်ပင်ဆိုပြီး ပေးလိုက်တယ်။
ဟိုလူက ကျေးဇူး တဲ့။ အိမ်ရောက်မှ သတိရတယ်။အဲဒီလို တည့်တည့်လွဲတာနော်။
မိုက်တာလား၊ မှောင်တာလား နားမလည်ဘူးခင်ဗျ။
သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်မွေးတယ်၊ နောက် ၂ ရက်နေ လကွယ်ပြီ။ဂလို။
ကြားဖူးတာတော့ သီတင်းကျွတ်လမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ ထူးချွန်ထက်မြက်သူတွေဆိုပဲ…
ခုမှသိရတယ် ရွာထဲမှာ သီတင်းကျွတ်မွေးတွေ မနည်းပါလားးးးးးးးးးး
အင်္ဂလိပ်ရက်ယူရင်တော့ World Teacher’s Day!!
လူပျိုဂျီးချင်းလည်းတူလို့ အားပေးပါတယ် ဆရာဆန်နီရေ..
လွဲပြီးရင်း လွဲခဲ့တဲ့ ကိုကိုဆန်နီ့အတွက် ၊ ဖူးစာရေးနတ် ပစ်တဲ့ မြှား ဟာ ပစ်မှတ် ကို တိကျစွာ မှန်ပါစေဗျား ။
..ဖားခုန်ပြိုင်ပွဲကို..ဖာခုန်ပြိုင်ပွဲလို့ရေးမိတယ်…excuse my offensive language use,pls)ပထမဆုရတယ်။ အဲဒါ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဆုပေးမှာမှတ် နေတာ ကျောင်းက အငြိမ့်ငှားပြီးဆုပေးတယ်။ အငြိမ့်မင်းသမီးက ငဆန်နီကို ဆုပေးတာ မှတ်မိနေသေးတဲ့ အလွဲများထဲကတစ်ခုပါ။
ကိုဆန်နီရဲ့ အလွဲအချော်တွေ အမြန်ဆုံးတည့်မတ်ပါစေကြောင်း။အားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ်။